မြင့်မားသောနည်းပညာပူလေထုမှိုရေဆိုးရေဆိုးရေခန်းခြောက်စက် - Twesix စွမ်းအင် Co. ,, Ltd မှ
တည်နေရာ: နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » အစားအစာအတွက် အပူပေးအခြောက်ခံစက် » ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်များ » မြင့်မားသောနည်းပညာပူလေထုမှိုရေဆိုးရေဆိုးရေခန်းခြောက်စက်
1.ဒေတာအထက်စမ်းသပ်ခြင်းအခြေအနေအောက်မှာရှိပါတယ်: လေထုအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအပြင်ဘက်ယူနစ်,အားလုံး 15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အဝင်ပေါက်လေထုခန်းခြောက်, လေထုခြောက်သွေ့သောဘောလုံးကိုထွက်ပေါက်လေဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
2. Dehunlldlty volutne စံစမ်းသပ်အခြေအနေအောက်မှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်, ကပြင်ပ / မိုးလုံလေလုံအပူချိန်စိုစွတ်သောဘောလုံးအရသိရသည်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်.
3. ထုတ်ကုန်များ၏ update ကိုအရသိရသည်မော်ဒယ်များစွမ်းဆောင်ရည် nlight ကိုပြောင်းလဲသွားသည်,ကျနော်တို့အထူးအကြောင်းကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ကျေးဇူးပြု၍ nameplate ကိုနောက်ဆုံး version အဖြစ်ယူပါ Twesix 'Air Source Heat Pump Dryer ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းအင်ကိုဘာကြောင့်ချွေတာတာလဲ
ပွင့်လင်းပြီးပိတ်ထားသောလေမှုတ်စက်စနစ်၏ချို့ယွင်းချက်များကိုလုံး ၀ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်, နှင့်သူတို့၏အားသာချက်များကိုသုံးပါ;ပွင့်လင်းပြီးပိတ်ထားသော loopdryer စနစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုမထိခိုက်ပါ. သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်ရောက်ရှိသောအခါ, ပွင့်လင်းတံခါးပိတ်ခြောက်သွေ့နည်းလမ်းများအသိဉာဏ် switched, နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ငုပ်လျှိုးနေအပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်အနိမ့်အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအပူနိမ့်ထိရောက်မှုကိုရှောင်, ပင်အလွန်အမင်းနိမ့်သောအပူချိန်မှာ. လျှပ်စစ်မီးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရန်အပူမရှိဘဲပင်, ခြောက်သွေ့သောအခန်းများကိုလျင်မြန်စွာအပူပေးနိုင်သည်, နှင့်စနစ်ကပို enerv- အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်
4. QC ထိန်းချုပ်မှု
2, L / C (ကွန်တိန်နာအမိန့်သာ)
3, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, (နမူနာနိုင်ရန်အတွက် & အစိတ်အပိုင်းများ)
2, သင်၏တပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်အားကျွမ်းကျင်သောအအေးခန်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာအထောက်အပံ့များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါသည်, debugging နှင့်စစ်ဆင်ရေး.
3, ကျနော်တို့အတွက်အပိုပစ္စည်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုထောက်ပံ့ & အဆိုပါအာမခံအချိန်ပြီးနောက်.
4, အကယ်၍ သင်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံရှိသင်၏အလုပ်သမားများကိုသင်တန်းပေးမည်.
1, သင်၏တပ်ဆင်မှုအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု, စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
2, တစ်နှစ်အာမခံ, တိုးချဲ့ထားသောအာမခံအတွက်သင်ပေးချေနိုင်သည်.
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, pls ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်.
ခေါက်ဆွဲခြောက်အတွက် လုပ်ငန်းသုံး ခေါက်ဆွဲခြောက်စက် ခေါက်ဆွဲခြောက်စက်
1000ဆန်ခေါက်ဆွဲအတွက် စက်မှုခေါက်ဆွဲခြောက်စက်,အာလူးခေါက်ဆွဲနှင့် အခြားခေါက်ဆွဲများ
လုပ်ငန်းသုံး Zucchini ခေါက်ဆွဲခြောက်စက် Asian Rice Noodles Dryer
လေပူခေါက်ဆွဲခြောက်အခြောက်ခံစက် Chow Mein အခြောက်ခံစက် Rice Noodles Dehydrator
သံမဏိငါးခြောက်စက်စက်ခြောက်သွေ့စက် ၇၀၀ ကီလိုငါးလျှပ်စစ်ခြောက်ခြောက်စက်ငါးမျှားစက်ခြောက်စက်
လျှပ်စစ်သုံးစက်ရုံခြောက်သွေ့မီးဖိုငါးခြောက်စက်စက်သုံးစက်အနိမ့်စား ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်
ပင်လယ်သခွားသီးနှင့်အခြောက်ခံစက်အတွက်ငါးပူပြင်းသောပင်လယ်ပင်လယ်ပင်လယ်ပင်လယ်ရေခန်းခြောက်ခန်းအတွက်စွမ်းအင်အပူ pump pump dryer